Wararka - Sidee bay warshadaha biirku u soo kabteen? Bal eeg baararka horumarka ee dalalkan
Ku soo dhawoow mareegahayaga!
Qalabka Beer-qarinta ee Comercial
Qalabka Dhabta ee Brewery
Baarka & Baarka&Makhaayadaha Beerta ee Nidaamka
Laba Markab Brewhouse System
Seddexda Maraakiibta Hab-samaynta
Nidaamka Brew Four Vessel
Nidaamka Kululaynta Uumiga
Dabka Tooska ah ee Kululaynta
Nidaamka Wax-qabashada Korontada
Nadaamka Mash-ka-baxa ah ee Aan-La'aanta ah
Taangiga Halsano ee Madax-Labada ah
Hal darbiga fermenter
Fermenter is dulsaaran
Haamaha halsano ee muraayadda
Haanta Beer ee Dhallaanka Horizontal
Taangiga Beer ee Darbiga Keliya
Haanta Beer ee Dhallaanka Toosan
Cutubka qaboojinta Brewery
Qaybta CIP ee Brewery
Nidaamka Xakamaynta Brewery
Nidaamka Brewery ee tooska ah
Dhalada Beer&Dasasadaha& Keg Buuxinta Makiinada
Mashiinka buuxinta gasacadaha Beer
Agabka iyo Mashiinada Kaalmada
Haanta Kaydka Miraha
Sidee bay warshadaha biirku u soo kabteen? Bal eeg baararka horumarka ee dalalkan
Baararka iyo maqaayadaha ayaa midba midka kale u furmay, iyadoo ay weheliso soo kabashada dhaqaalaha habeenkii iyo dhaqaalaha kobcaya ee suuqyada waddooyinka, suuqa khamriga ee gudaha ayaa muujiyay dardar wanaagsan oo soo kabasho ah. Haddaba, ka waran asxaabta ajaanibka ah? Wershadaha farsameeya ee Maraykanka oo mar ka werwersanaa in aanay sii noolaan karin, baararka Yurub oo ay taageerayaan foojarada cabitaanka, iyo qaar ka mid ah warshado wax soo saara. Hadda ma hagaagsan yihiin?
Boqortooyada Ingiriiska: Baarku waxa uu furmi doonaa Julaay 4 marka ugu horraysa
Xoghayaha ganacsiga ee Britain Sharma ayaa sheegay in furitaanka baararka iyo makhaayadaha "ugu horrayn" ay tahay inay sugaan illaa 4-ta Luulyo. Sidaas darteed, baararka Ingiriiska ee sannadkan waxay xirnaan doonaan wax ka badan saacadaha shaqada.
Si kastaba ha ahaatee, toddobaadyadii dhawaa, baararka badan ee UK waxay bixiyaan biirka la qaato, kaas oo aad caan u ah dadka cabba. Aad u badan oo jecel biirka ayaa ku raaxaystay biirka baararka ugu horreeya bilo gudahood wadada.
Baararka wadamada kale ee Yurub ayaa sidoo kale dib loo furayaa ama waxay ku dhow yihiin inay dib u furmaan. Markii hore, shirkado badan oo biirka ayaa ku dhiirigeliyay kuwa jecel biirka inay hore u iibsadaan boonooyin si ay u taageeraan baararka si ku meel gaadhka ah u xidhan. Hadda, marka baararkan dib loo furi karo, ilaa 1 milyan oo dhalo oo biir ah oo bilaash ah ama horay loo bixiyay ayaa sugaya kuwa cabba inay yimaadaan.
Australia: Ganacsatada khamriga waxay ku baaqeen in la joojiyo cashuur kordhinta khamriga
Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta ajnabiga ah, soosaarayaasha biirka, khamriga iyo khamriga Australiyaanka ah, hoteelada iyo naadiyada ayaa si wadajir ah u soo jeediyay dowladda federaalka inay joojiso kordhinta canshuurta khamriga.
Brett Heffernan, madaxa fulinta ee Ururka Brewers Association, ayaa aaminsan in hadda aanay ahayn wakhtigii kor loo qaadi lahaa cashuuraha isticmaalka. "Kordhinta canshuurta biirka waxay dharbaaxo kale ku noqon doontaa macaamiisha iyo milkiilayaasha baararka."
Sida laga soo xigtay Shirkadda Cabbitaannada Khamriga ee Australiya, iibinta cabitaannada khamriga ee Australia ayaa si aad ah hoos ugu dhacay sababtoo ah saameynta cudurka faafa ee taajka cusub. Bishii Abriil, iibka biirka ayaa hoos u dhacay 44% sanadba sanadka ka dambeeya, iibkuna wuxuu hoos u dhacay 55% sanad-sannadka. Bishii Maajo, iibka biirka ayaa hoos u dhacay 19% sanad-sannadka, iibkuna wuxuu hoos u dhacay 26% sanad-sannadka.
Maraykanka: 80% shirkadaha wax soo saarka ee farsamada gacanta waxay helaan maalgelinta PPP
Sida laga soo xigtay sahankii ugu dambeeyay ee Ururka Brewers Association (BA) ee saamaynta cudurka faafa ee warshadaha farsamada gacanta, in ka badan 80% warshadaha farsamada ayaa sheegay in ay maalgelin ka heleen Barnaamijka Ilaalinta Mushaharka (PPP), taas oo ka dhigaysa kalsooni dheeraad ah. ku saabsan mustaqbalka. kalsooni.
Sababta kale ee kor u kaca rajada wanaagsan ayaa ah in gobolada Mareykanka ay bilaabeen in ay dib u furaan ganacsigooda, inta badan gobolada, warshadaha khamriga waxay ku jiraan liiska hawlgaladii hore ee la ogolaaday.
Laakiin iibka inta badan beeralayda biirka ayaa hoos u dhacay, badhkoodna waxay hoos u dhaceen 50% ama ka badan. Marka ay la kulmaan caqabadahan, marka lagu daro codsashada deynta barnaamijka dammaanadda mushaharka, soosaarayaasha biirka ayaa sidoo kale dhimaya kharashaadka intii suurtagal ah.
Waqtiga boostada: Seb-05-2020
No. 12111 Jingshi Road, Degmada Lixia, Jinan City, Shandong, Shiinaha.